बाइबलमा पावलले भनेका छन्, “हरेक प्राण उच्‍च शक्तिहरूको अधीनमा बसोस्। किनभने परमेश्‍वरबाहेक अरू कुनै शक्ति छैन: जति शक्तिहरू छन् ती सबै परमेश्‍वरले नै नियुक्त गर्नुभएको हो। त्यसकारण जसले शक्तिको विरोध गर्छ, त्यसले परमेश्‍वरको आदेशलाई इन्कार गर्छ: र ज-जसले विरोध गर्छन् तिनीहरूले दण्डाज्ञा पाउँछन्” (रोमी १३:१-२)। पावलको वचनअनुसार अभ्यास गर्दै हामी सबै कुरामा शासन गर्ने शक्तिहरूको अधीनमा बस्नुपर्छ। र अझै पनि नास्तिक चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सरकारले त्यसको इतिहासभरि धार्मिक विश्‍वासलाई सताएको छ। यो परमेश्‍वरको शत्रु हो, र यसले हामीलाई प्रभुमा विश्‍वास गर्न नदिने मात्र होइन, तर यसले सुसमाचार फैलाउने र परमेश्‍वरको गवाही दिनेहरूलाई गिरफ्तार गर्छ र सताउँछ। यदि हामी चिनियाँ कम्युनिस्ट सरकारको सामु झुक्यौं, प्रभुमा विश्‍वास गर्न छोड्यौं, र सुसमाचार फैलाउन र परमेश्‍वरको गवाही दिन बन्द गर्‍यौं भने, के हामी प्रभुको विरोध गरेर अनि उहाँतिर पिठिउँ फर्काएर शैतानको पक्षमा उभिएका हुँदैनौं र? मैले साँच्चै यो कुरा बुझ्न सकेको छैन: शासन गर्ने शक्तिहरूको विषयमा प्रभुको इच्छाअनुरूप गर्नका निम्ति मैले के गर्नुपर्छ? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
बाइबलमा पावलले भनेका छन्, “हरेक प्राण उच्‍च शक्तिहरूको अधीनमा बसोस्। किनभने परमेश्‍वरबाहेक अरू कुनै शक्ति छैन: जति शक्तिहरू छन् ती सबै परमेश्‍वरले नै नियुक्त गर्नुभएको हो। त्यसकारण जसले शक्तिको विरोध गर्छ, त्यसले परमेश्‍वरको आदेशलाई इन्कार गर्छ: र ज-जसले विरोध गर्छन् तिनीहरूले दण्डाज्ञा पाउँछन्” (रोमी १३:१-२)। पावलको वचनअनुसार अभ्यास गर्दै हामी सबै कुरामा शासन गर्ने शक्तिहरूको अधीनमा बस्नुपर्छ। र अझै पनि नास्तिक चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सरकारले त्यसको इतिहासभरि धार्मिक विश्‍वासलाई सताएको छ। यो परमेश्‍वरको शत्रु हो, र यसले हामीलाई प्रभुमा विश्‍वास गर्न नदिने मात्र होइन, तर यसले सुसमाचार फैलाउने र परमेश्‍वरको गवाही दिनेहरूलाई गिरफ्तार गर्छ र सताउँछ। यदि हामी चिनियाँ कम्युनिस्ट सरकारको सामु झुक्यौं, प्रभुमा विश्‍वास गर्न छोड्यौं, र सुसमाचार फैलाउन र परमेश्‍वरको गवाही दिन बन्द गर्‍यौं भने, के हामी प्रभुको विरोध गरेर अनि उहाँतिर पिठिउँ फर्काएर शैतानको पक्षमा उभिएका हुँदैनौं र? मैले साँच्चै यो कुरा बुझ्न सकेको छैन: शासन गर्ने शक्तिहरूको विषयमा प्रभुको इच्छाअनुरूप गर्नका निम्ति मैले के गर्नुपर्छ?
अर्को: चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा आएदेखि यता यसले धार्मिक विश्‍वासको सतावटलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको छ। विशेष गरी यसले सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको मण्डलीलाई गरेको दमन, अति नै कठोर भएको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको मण्डलीको निन्दा गर्न, दोष लाउन र बदनाम गर्न टेलिभिजन, रेडियो, समाचार-पत्रहरू, इन्टरनेट र अन्य मिडिया मात्र प्रयोग गरेको छैन, तर यसका सदस्यहरूलाई व्यापक मात्रामा गिरफ्तार गरेको र क्रूर यातना पनि दिएको छ, र यातना दिएर नै मारेको पनि छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको मण्डलीलाई गरेको सतावट किन यति कठोर छ?